Kuthiwani uma ingane ingalaleli abazali bayo?
Okhulile ingane iba, ngokuphindaphindiwe uyabona ukuthi iseluleko sabazali emagqumeni noma ngenxa yokuzikhukhumeza kuhlanzekile. Indlela yokukhuluma nezingane ukuze bakuzwe? Ngolunye usuku into efanayo ifana nomzali ngamunye: ubona ukuthi ingane yakho iziphatha kanjani kulokhu noma isimo, futhi uqonde ukuthi awukwazi ukusiza ngaphandle kokuphazamisa.
Indodakazi yakho eneminyaka engu-8 iyagijima umsila wakhe ngemuva komngane wayo, futhi ubheka ngokuzidla futhi engabonakali ukuyikhathalela. Noma indodana yakho eneminyaka engu-13 ubudala, oye waba yindodana ekhulile yasekhaya, ngokuzumayo uzama ukunqoba inhlonipho yabalingani nabo ngosizo lwegwayi, izibhamu nezingxabano ezingapheli nabafundisi. Ingabe kufanelekile ezimweni ezinjalo ukweluleka izingane noma ukuzinikeza ilungelo lokuzikhandla ngamaphutha futhi ufunde emaphutheni abo? Futhi, uma unquma ukukhuluma, indlela yokukhetha amagama afanele, ukuze ingane ingacasuli, ayikuvali futhi ikusole ngokushiya ngemuva futhi ungaqondi lutho? Kuthiwani uma ingane ingalaleli abazali bayo futhi kufanele yenzeni?
Ukuze unikeze iseluleko, uma ungazange ubuzwe ngakho, ingenye yezinto ezingabongi kakhulu. Kodwa kunzima kakhulu ukweluleka ingane okuthi, njengokungathi nge-wand magic evela othandekayo wakhe, yaphenduka yaba umuntu omncane ozimele. Ngisho izolo wayengeke aphile izinsuku ezimbalwa ngaphandle kwakho, futhi namuhla ucela ukuba uyeke ukumanga emgwaqweni bese ubeka amehlo akho njalo uma uzama ukwabelana ngokuhlakanipha kokuphila. Omunye walolu hlobo lokuzimela angazibonakalisa eminyakeni engu-8, kanti omunye ongaphambilini kuka-14. Kodwa kunoma yikuphi, lokhu kuyoba isimanga esingathandeki kubazali. Ukuzimela kuhlale kuyisikhubekiso ebuhlotsheni babazali abanomntwana omdala. Futhi, uma usabela ekuzameni ukukhuluma ngenhliziyo enhliziyweni, uthola ukucasula okucasuliwe, ukukhala futhi ngisho nokugubha iminyango, uyazi: awuwedwa. Kodwa, ngisho noma izingane zihlukumezeka ukuba zizimele futhi zihlale izingqondo zabo, kuseminyakeni yobudala ukuthi zidinga ukusekelwa kwabazali babo ngaphezu kwakho konke. Nsuku zonke bafunda okuthile okusha mayelana nesakhiwo sezwe. Kumele benze izinqumo ezinzima ezihlobene nobungane, uthando lokuqala, ubudlelwane nabantu abadala. Futhi abazali kuphela abanganikeza iseluleko esidingekayo. Into esemqoka ukukwenza ukuze ingane ikuzwe.
Shiya ukugxeka nawe
Inkinga Izazi zengqondo ziphindaphindiwe: uma ufuna i-interlocutor ikuzwe, udinga ukukhuluma ngokuthula ngaphandle kokubonisa imizwelo emibi. Lokhu kusho ukuthi emazwini akho akufanele kube necala, ayikho intukuthelo, ayikho icala, akukho ukugxeka. Ngikholelwa, ngisho nengane eneminyaka emihlanu ubudala ingahlukaniswa kalula ngezwi, umama uthukuthele naye noma cha. Yini ongayisho mayelana nentsha! Enye into ukuthi kunzima kakhulu ukukhuluma ngokuthula, uma uphinda amagama afanayo ngamakhulu izikhathi, futhi umphumela uyinto. U-Anna, unina ka-Artem oneminyaka engu-12 ubudala: "Ngonyaka odlule sathuthela, futhi iNhloko yahamba esikoleni esisha. Esikhathini esidala wayengumfundi omuhle kakhulu, othisha bakhe bamthanda futhi bamxolela inkululeko eminingi. Yena, isibonelo, ugqoke izinwele ezinde, agqoke ngesitayela semidlalo futhi ngokuvamile ukhululekile kakhulu. Esikoleni esisha, ngokushesha wathola ulimi olufanayo nabafana, kodwa ngothisha weklasi ngesikhathi esisodwa, izinkinga ezifanayo zaqala. Ngenxa yobunwele bakhe obude nezintimba ze-rapper, wamlobela waba yizinhlanzi. Kulinganiselwa ngemuva kwekota yokuqala kubonisa: okunye okuyiRashiya, i-algebra ne-geometry, futhi ngokusho kwendaba yakhe ayithandayo (okuyiyo kuphela uthisha weklasi) - amaphuzu amathathu. Futhi lokhu kungakhathaliseki ukuthi wazama ngempela! Kodwa yini eyashiywe esikoleni esidala esikoleni esidala, lapha kwakuyimbangela yenkinga - ukhohlwe incwadi yokubhala, wathi okuthile kumfundisi okhaliphile, "wabonisa umbono wakhe" esikhundleni sokuphendula isabelo. Konke lokhu kunciphise amamaki. Ngiye ngitshela indodana yami izikhathi eziningi ukuthi udinga ukuzithoba, ukuhlonipha, nokucabangela othisha. Konke akusizi ngalutho. Kodwa eholidini ngemva kwekota yokuqala sahamba, futhi ekugcineni ngathola indlela efanele. Wathi into enjengale: "Zama ukuzibeka endaweni yothisha bese ubheka umfundi omusha ohlangothini. Le nsikazi inezinwele ezinde, i-trouser yakhe ibanzi futhi ibeke phansi kakhulu kangangokuba izigqoko zingabonakala zingaphansi. Othisha abasazi ukuthi ufunda kahle yini, kodwa useqaphele ukuthi unombono wakhe onzima kuzo zonke izinkinga. Ungathatha kanjani laba bantu abadala kulo mfana? "U-Artem wangibheka ngomsindo, wabe esethi:" Kulungile, ngizocabanga ngakho. " Kwakuyimpumelelo, ngoba ngaphambi kokuba aze, futhi engafuni ukuzwa lutho! Futhi emva kokubuya kwethu izimangaliso zaqala: indodana eya kumuntu ozinwele futhi - cha, akazange azinqamule izinwele zakhe, kodwa okungenani wayigcoba izinwele zakhe. Waqala ukuwageza nsuku zonke. Wangicela ukuba ngithenge amabhulukwe amasha esikoleni. Futhi ekuqaleni kukaDisemba, uthisha weklasi wayenosuku lokuzalwa, futhi indodana yamnika isipho. Kubonakala sengathi wayeziphatha ngendlela ehlukile esikoleni. Ekupheleni kwekota yesibini, igumbi lokufundela lingibize futhi lathi nginomfana othandekayo, ukuthi ngaphansi komthelela weqoqo uguqukile phambi kwamehlo akhe, umbeka emlandweni, kodwa uma kunjalo, uzoba nguhlanu.
Isifundo okudingayo ukuze ufunde
Esimweni esinzima, cishe, uzolingwa ukufaka ingcindezi kumntwana, ngoba abantu abadala bayazi kangcono! Kodwa lokhu akunakwenziwa. Okuhle kakhulu, uma uphumelela ekuhlwanyeleni ukungabaza emqondweni wengane: ingabe ngenza into efanele? Uma umntwana ecabanga ngakho, mhlawumbe, uzokwenza isinqumo esifanele. Futhi-okubaluleke kakhulu - kuyoba yisinqumo sakhe, hhayi esinqunyiwe ngabantu abadala. Futhi khumbula imithetho ethile elula yokuxoxisana: izingane aziqondi neze izingxoxo ezindala nezingaqondakali mayelana nokuphila. Uma ufuna ingane yesikole ikuzwe futhi inakekele iseluleko, khuluma ngokufishane, ngokucacile futhi uvumele ukuthi ungamsoli.
Vumela ingane ukuthi yenze isinqumo
Xoxa ngezinketho, futhi noma ngabe indodakazi inikeza okuthile okubonakala sengathi akulungile kuwe (vuka isigamu sehora kamuva futhi ulungele isikole emizuzwini engu-10), masizame ngesonto. Kunzima kubazali ukubheka indlela izingane ezizenza ngayo amaphutha. Kodwa ngezinye izikhathi amaphutha amane adingekayo ukuze athole iziphetho ezifanele. Uma indodakazi izama ukwenza ngendlela yakhe futhi iqinisekise ukuthi lokhu akusebenzi, esikhathini esizayo uzolalela ngokucophelela amagama akho.
Ngesikhathi esifanele, endaweni efanele
Uma uphatha u-unobtrusively ubhale iseluleko sakho kwingxoxo yosuku lweviki, amathuba okuthi uzozwakala ukwanda ngezikhathi eziningana. Qaphela lapho ingane yakho ijwayele ukusetha nawe ukukhuluma. Omunye ophuthumayo ukuze wabelane ngokubonakala ngemuva kwesikole, othile uthanda ukukhuluma ngaphambi kokulala, futhi othile uthola amandla lokhu kuphela kuphela ngempelasonto. Uma udaba oluzoxoxwa lubaluleke kakhulu, linda kuze kube sobabili ozolile. Izingane zizwela kakhulu isimo sengqondo sabantu abadala, futhi ukucasuka kukuvimbela ukuba ucabange ngokucacile. Lapho izifiso zifudumele, kungcono ukulinda izinsuku ezimbalwa. Ngalesi sikhathi uzobe uzolile futhi ukwazi ukubhekisisa isimo. Futhi emva nje kwalokhu kuqale ukuxoxa ngalokho okwenzekile.
Izifo ezinganeni ezisuka ku-12 kuya ku-14
Ukuphika ingane ukuba idansa
Izimbangela ze-acne ehlobene nobudala
Indlela yokuvukela: izinkinga zobusha kanye nezindlela zokuzixazulula
Usizo lwezingqondo kubazali bentsha
Njalo ngokuziwayo: ukubuka kabanzi kwamamodeli afanele kunawo wonke amabhulukwe wesifazane omnyaka
Indlela yokuphonsa imicabango yakhe ekhanda lami?
Ukunakekelwa kwe-Age nokukhumba
Amaqebelengwane e-Lemon anama-meringues
I-Galantine kusuka enkukhu ebhaka
Isobho nge-china nama-mushroom
Abesifazane bathuthukisa kanjani ukusebenza kwabo?
Imithetho ye-etiquette yeselula
Ukugqoka komshado wama-pink: ukubonakaliswa kobubele obuthakathaka
Ukhilimu we-chocolate nge-clementines
Ukuthengwa kwezitshalo zangaphakathi